Shiinaha FRP Alaab -hayaha kaydinta cuntada iyo Warshadda | Zhaofeng
1. Shuruudaha waxqabadka qalabka halsano
Inta badan waxaa jira saddex nooc oo warbaahin xasaasi ah oo ku jirta warshadaha halsano: mid waa daxalka badeecadiisa ama dhex -dhexaadinta habka wax soo saarka iyo sheyga laftiisa, sida: citric acid, acetic acid, cusbada ku jirta maraqa soy, iwm.; midda kale ayaa lagama maarmaan u ah geedi socodka Agabyo kala duwan oo kaabayaal ah iyo alaab nadiifin iyo madhalaysnimo, sida: cusbada kala duwan, cusbada aan caadiga ahayn (hydrochloric acid, sulfuric acid, sulfurous acid, iwm), alkalis (sodium hydroxide, ammonia); ta saddexaad waa isku darka labada kor ku xusan, waana inay ahaato mid u fiican bay'ada La daweeyo gaaska qashinka, biyaha wasakhda ah, iwm.
Maaddadu waa mid aan sun ahayn waxayna la xiriiri kartaa cuntada
Qalabka halsano waa inuu buuxiyaa shuruudaha nadaafadda ee cuntada.
Ku habboon ka -hortagga iyo xakamaynta bakteeriyada wasakhaysan
Jeermiska bakteeriyada ama bakteeriyada ku jirta habka halsano waa cadowga warshadaha halsano. Caabuqyada kaliya ma horjoogsadaan koritaanka noocyada wax -soo -saarka iyo isku -darka alaabta, waxay carqaladeeyaan wax -soo -saarka caadiga ah iyo amarka maamulka, laakiin sidoo kale waxay saameeyaan tayada badeecada ee hannaanka xiga, waxayna si xun u keentaa guuldarro. Haanta, ku shub dareeraha halsano bulaacada, taasoo keenta wax -soo -saar aad u weyn. Sidaa darteed, qalabka waxaa laga rabaa inaanay lahayn dhammaad dhintay, daadad, iyo alaabtiisu waa bilaa wasakh, mana sahlana in la tarmo ama la hayo bakteeriyada xun.
Hayso xoog iyo adayg gaar ah. Warshadaha halsano, marka lagu daro taangiyada kaydinta alaabada la dhammeeyay iyo alaabta ceeriin iyo kaabayaasha ah, qalabka qaar ayaa leh shuruudo heerkulka, cadaadiska, iyo kiciyeyaasha, sida taangiyada kala duwan ee halsano, taangiyada dhexdhexaadinta ee warshadaha glutamate monosodium, tiirarka isweydaarsiga ion, iyo foojignaanta faaruqinta ee waxsoosaarka citric acid. Qasacadaha iyo wixii la mid ah. Sidaa darteed, waxaa jira xoogag iyo shuruudo looga baahan yahay agabka qalabka wax -soo -saarka.
2. Xaaladda maaddada qalabka halsano ee hadda jira
Waqtigan xaadirka ah, inta badan qalabka loo isticmaalo warshadaha halsano ayaa qiyaas ahaan loo qaybiyey saddex nooc oo qalab ah. Qaybta koowaad waa isku-darka birta kaarboonka, kaas oo lagu daboolay caag, fiber galaas oo la xoojiyay caag, bir bir ah, caag iyo dhoobada dhoobada u adkaysta, iwm; qaybta labaad waa bir birta ka samaysan qaybta saddexaad waa caag isku dhafan (PVC, PP, iwm) oo ka kooban kaarboon kaarboon iyo qalab caag ah, Qiimuhu waa dhexdhexaad, guud ahaanna wuu buuxin karaa shuruudaha iska caabinta daxalka guud, laakiin waxqabadka maaddada dahaadhka ah ee qalabka ka kooban birta kaarboon waa aad uga duwan birta kaarboonka, taas oo keenta dhibaatooyin badan xagga dhismaha iyo dayactirka, iyo dahaadhu way fududahay inay dhacaan, taasoo keenaysa daxalka qalabka Iyo wasakhaynta dhexdhexaadka gudaha. Intaa waxaa dheer, qiimaha dayactirka ayaa kordhaya iyo nolosha adeegga ayaa si weyn loo gaabiyey. Waxaa intaa dheer, mar haddii dahaarka u adkaysta u adkaysiga ee weelka uu galo, qolofka birta kaarboon-ka ayaa si aad ah u burburi doona, oo xitaa qalabka oo dhan waa la tirtiri doonaa. Taangiyada cadaadiska, shilal halis ah sida qarax ayaa iyagana dhici kara. Qalabka caaga ah wuxuu leeyahay iska caabin daxal oo aad u fiican waxaana loo adeegsan karaa warbaahinta kala duwan. Laakiin qalabka caaggu asal ahaan waa balaastikada injineernimada kuleyliyaha, heerkulka adeeggu ma sarreeyo (sida PVC, badiyaa ka hooseeya 70 ℃), ama jajaban heerkul hoose, si sahlan loo dillaaci karo (sida PP, iwm), xoog yar, si sahlan gabowga , sidaa darteed arjiga ayaa xaddidan. Qalabka guud ee birta ah ee birta ah wuxuu leeyahay iska caabin daxalka guud oo wanaagsan, ka -baaraandegidda habboon iyo dayactirka, xoogga sare, iyo iska -caabbinta heerkulka wanaagsan. Waxaa inta badan loo adeegsadaa qaar ka mid ah qalabka muhiimka ah oo leh xaalado aad u adag. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka dhabta ah, waxaa sidoo kale jira xoogaa dhibaatooyin ah, sida daxalka iyo sumowga bakteeriyada. Haddii xalku uusan fiicnayn, kaliya ma awoodi doonto inuu ka faa'iideysto faa'iidooyinkiisa, laakiin wuxuu kaloo sababi karaa khasaare weyn.
Saddex, sifooyinka qalabka FRP
Buuxi shuruudaha nadaafadda cuntada. Haddii ay buuxin karto shuruudaha nadaafadda cuntada ayaa ah shuruudaha ugu muhiimsan ee qalabka halsano. Haddii alaabada FRP ay buuxin karaan shuruudaha nadaafadda, furaha doorashada xulashada dahaarka dahaarka ah waa cusbi heer-cunto ah.
Fudud iyo xoog sare. Cufnaanta gaarka ah ee FRP waa 1.4-2.0 oo keliya, halka xoogga cilladda ee FRP-nabarka fiber-ku uu gaari karo 300-500Mpa, kaas oo ka sarreeya xoogga ugu dambeeya ee birta caadiga ah, wuxuuna leeyahay faa'iidooyinka gaadiid habboon, rakibidda iyo dayactirka.
Iska caabin daxalka u fiican. Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee FRP waa iska caabbinta daxalka ee wanaagsan. Iyada oo la xulanayo nooca iyo darajada xabagta iyo hannaanka wax -ku -habboonaanta habboon, ayaa alaabooyinka FRP ee u adkaysta asiidhyo kala duwan, alkalis, cusbada iyo dareeraha dareeraha ah la soo saari karaa.
Waxqabadka dusha sare ee wanaagsan iyo nadiifinta fudud iyo waxqabadka jeermis -dile. Sababtoo ah fiber -ka galaaska ah ee la xoojiyay caaggu waa mid si wada jir ah loo sameeyay, ma jiraan wax kala -goysyo ah, gidaarka gudahana waa siman yahay. Markaad la xiriirto warbaahinta kiimikada, waxaa jira waxyaalo yar oo daxalka ah iyo ifafaaleyaal korka ka muuqda, mana jiraan bakteeriya iyo nooleyaal. Sidaa darteed, ma wasakhayso dhexdhexaadinta waana sahlan tahay in la nadiifiyo. Kormeer gaar ah oo ay samaysay waaxda maareynta cuntada iyo dawooyinka, FRP waxay gaartay shuruudihii warshadaynta cuntada iyo warshadaha dawooyinka.
Naqshadayn wanaagsan. FRP waa qalab isku jira oo beddeli kara nooca, saamiga tirada, iyo habaynta qalabka xoojinta si loo buuxiyo shuruudaha waxqabadka kala duwan.
Farsamada dhismaha oo wanaagsan. Rinjiga aan la hubin iyo agabyada xoojinaya waxay awood u leeyihiin inay beddelaan qaababka, sidaa darteed si fudud ayaa loogu farsamayn karaa qaababka la rabo iyada oo loo marayo habab kala duwan iyo caaryaal.
Qiimaha iyo hawlgalka ayaa hooseeya. Qiimaha caagadaha la xoojiyay ee balaastikada ayaa sarreeya iyadoo ay ugu wacan tahay alaabta ceeriin ee la isticmaalo. Guud ahaan marka la hadlayo, qiimaha qalabka FRP wuxuu ka sarreeyaa kan qalabka birta kaarboonka iyo qaar ka mid ah qalabka balaastigga ah, laakiin wuu ka hooseeyaa kan birta birta ah iyo qaar ka mid ah qalabka birta kale ee aan birta ahayn. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah faa'iidooyinka miisaanka fudud, iska caabinta daxalka wanaagsan, iyo cimriga dheer ee FRP, rakibidiisa, isticmaalkiisa iyo kharashkiisa oo dhammaystiran ayaa hooseeya.
Hore: Taangiga kaydinta biyaha ee FRP ultrapure
Xiga: Haanta kaydka ee Acid iyo alkali